पत्नीको भावना बुझ्न खप्पिस हुन्छन यस्तो राशिका पति, गर्छन् श्रीमतीलाई धरै माया!!! – News Nepali Dainik
पत्नीको भावना बुझ्न खप्पिस हुन्छन यस्तो राशिका पति, गर्छन् श्रीमतीलाई धरै माया!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: २२:३४:५१
भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन्। जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल र माया प्रेम हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ।
२) वृश्चिक राशी
३) कन्या राशी
४) सिंह राशी
यो राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन्।
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 10:37 pm
४७२८ पटक हेरिएको